Xasan Sheekh Maxamuud,”Dhalinyaradii Tababarka loogu qaaday Eritrea waa la iibsadey”.
June 10, 2021 Xuseen 5
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku aaddan siyaasadda dalka,, dhalinyaradii Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday wadanka Eritrea iyo xaaladda doorashooyinka guud ee Soomaaliya.
Ugu horrayn Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu si kulul uga hadlay Dhalinyaro la sheegay in dalka Eriteria tababar loogu qaaday, kuwaasi oo ilaa hadda aysan waalidiintoodu aysan meelna ku sheegin Nolol iyo geeri.
Xildhibaan ahna musharax madaxweyne Xasan Sheekhy Maxamuud ayaa sheegay in dhallinyarada Soomaaliyeed ee Eritrea ku maqan ay Dowaldda Federaalka Soomaaliya aysan ilaa hadda caddeyn halka dhalinyaradaasi xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo tiradooda, isagoo intaa ku daray in Dwoaldda ay kaag baahan yihiin war cad oo ku aaddan dhalinyarada maqan.
Ugu dambayntiina waxa uu sheegay in Dwoalddu ay dhalintaasi iibsatay, oo ay ka dagaalamayaan Itoobiya, waxaana tiro dhowr jeer ah soo baxay warar sheegayay in dhalinyardii Tababarka loogu qaaday Eriteria ay qayb ak noqden dagaalka Itoobiya ay kula jirto Qoomiyadda Tigreega, waxaana waalidiinta ay carruurtoodu ka maqan yihiin ay bannaanbaxyo ka dhigeen Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya iyagoo baaq u diray Dowladda Federaalka, oo ay ka dalbadeen in ay caddeyso halka ay ku sugan yihiin dhalinyardii ay qaadday.
Walaaahi waa murugo u soo hoyatay SOOMAALI WEYN. War arrintani qabiil ma laha. Waa musiibo ku dhacday dhammaan dhalinyaradii SOOMAALI WEYN.
Bal eega Madaxda SOOMAALIDA oo ugu horeeyo FARMAAJO waxaa uu sameenaayo. Waa dhib iyo hoog. Waa dhalinyaradii oo la gumaaday.
ALLOOOW SAHAL AMUURAHA.. HADII LA YAABO, YAASIINKA YAASIINKA
Kkkkkk WAR ISKA AAMUS CEEB KUUMA YARE , hassan sh cid waliba wax bay ku xaasuusan lakiin anigu waxaa KU XASUUSTAA GABDHIIHII SOMALIYEED EE SHARFTA BADNAA IN UU KA QAATAY LACAG DHOOFINTOODA KACDIBNA KU IIBSADAY LACAG KU YIRI WADAMADII UU UDIRAY WAA ADOOMO IDIN SHAQEYNAYA SIDAAD DOONTAAN YEELA ……SUBXAANA ALLAH, IYAGANA UGU SOO JAWAABEEN UAE NINKII UQAABILSANAA DIIWAAN GELINTA DUMARKA ,WAXAAD NOO SOODHIBTAY DUMAR DAALAN EE MARKA XIGA NOO SOOBA KUWOODA YAR YAR KA AH MACNAHA DHAYLO AH, ,,,,,,,,ceeb kuuma dhinna ee iska aamus gacan taagte
Farmaajo iyo Khayrre arrinkaan si run ah uga hadlimayaan weligood sababtoo ah waa fadeexad aysan jawaab u ahayn. Farmaajo wuu bartay Soomaali — waxyar bay xamaasad la qayliyaan kadibna iska aamusaan.
Waxaan kula talin lahaa waalidiinta: iska daaya baroorta iyo inaad inta maalin soo baxdaan kadibna iska aamustaan. Waxba tarimayso inaad buuqdaan markii war cusub kasoo baxo dhallinyarada loo hibeeyey Abiy Ahmed iyo Amxaaro kadibna iska shuuqdaan.
Waxaa loo baahan yahay inaad waddaan mudaharaad joogto ah ilaa war idin shaafiya la idin ka siiyo carruurtiinnii raq ama ruux. Waxaan kula talin lahaa in waalidiinta iyo inta taageersan ay sameeyaan mudaharaad fadhi ah oo joogto ah (ictisaam) iyagoo degaya taallada Daljirka Dahsoon iyo agagaarkeeda si la mid ah kii dadka Masaaridu ka sameeyeen goobta Raabica markii ay diiddanaayeen afgambigii marxuum Maxamed Mursi. Farmaajo kuma dhaco inuu idiin xasuuqo sidii Siisi sameeyey. Waa in waalidiinta iyo inta taageersan halkaas degaan ilaa ay ka helayaan war ay ku qancaan.
Dadweynaha reer Muqishana waa inay waalidiinta keenaan: teendhooyin, gogol, musqulaha la raro (mobile toilets), cunto, biyo, iyo adeeg caafimaad.
Macnacle xasan isagaa gabadhah Somalidda iibsan jiray.